लोकगीत प्रतियोगिताको समापन समारोहमा गएर मन्त्रीज्यूले निकै सान्दर्भिक र सागर्भित भाषण दिए : “संस्कृति नै हाम्रो पहिचान हो...हाम्रो संस्कृति रहेसम्म मात्रै हामी रहन्छौं, संस्कृति नै रहेन भने हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन । त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कृतिको सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्छ ..., ...”
गाडीभित्रको रेडीयोमा मधुरो स्वरमा यौटा पुरानो नेपाली गीत बजिरहेको थियो । चालकले गाडी स्टार्ट गर्नै लागेको थिए, मन्त्रीज्यूको आवाज आयो : “ खै, रामबहादुर, पहिले त्यो गीत बन्द गर त ...!...यहाँपनि दुई घण्टासम्म पट्यार लाग्ने लोकगीत सुन्दा-सुन्दा दिक्क लागेको छ ... बरु एफ. एम. लगाऊन, त्यहाँ नयाँ-नयाँ हिन्दी र अंग्रेजी गीतहरु बज्दै होलान ।”
दिनेश राज 24/3/10 10:06 PM
Aakar 24/3/10 10:18 PM
कुरा एकदमै सहि हो ! हामी प्राय: यसै गर्छौँ । :P
Ashesh 25/3/10 9:12 AM
R 25/3/10 3:08 PM
Chaitanya 27/3/10 6:07 AM
Dhruba Panthi 27/3/10 11:41 AM
यस्तै छ हाम्रो संस्कृति प्रेम...
दूर्जेय चेतना 27/3/10 4:54 PM
हो त। हामी आडम्बरमा जीवन बाच्छौ। सधै सधै यस्तै छ। मलाई एउटा धटनाको याद आयो। युद्द चलिरहेको थियो नेपालमा। मेरो क्षेत्रका एकजना नेतालाई माओवादीहरुले बेस्करी कुटे र मर्‍यो भनिकन बासधारीमा फालेर हिडे... पछि अस्पताल काठ्मान्डू पुर्‍याईयो। मेरो ब्यत्तीगत चिनजानका मान्छे भएकाले फलफूल बोकेर बीर अस्पताल पुगे। म सगं राम्रै बोले उनी र वेटमा बसेरै कुरा गरे। निकै सन्चो भईसके छ भन्ने लागिरहेको थियो।
लौ लौ सान्ती मन्त्री आउदै हुनु हुन्छ तपाईलाई भेट्न भनेर एक जना उनका चम्चेले के भनेका थिए।। नेता ज्यू त बेडमा पल्टेर, मुख छोपेर ऐया र आथ्था गरेर , हूहू.. हूहू... गर्न पो थाले त। हत्तेरीका त्यो १०० रुपैयाको फलफूल पनि फिर्ता लैजाउ जस्तो भएको थियो।।। तपाईको कथा सग यो धटनाको मुल मर्म ठ्याक्कै मिलेको ले निकै रमाईलो र चित्त बुझ्यो मेरो...
Nepalean दौंतरी 27/3/10 6:12 PM
एउटा पण्डितले सप्ताहमा माछा माछु खान हुन्न,यि शरिरलाइ फाइदा गर्दैनन,यि अशुद्द हुन यस्तै यस्तै भनेछन।
घर फर्केपछी ' ल बुढी आज माछाको तराकरी पका त ' भनेछन। बुढी पनि के कम,भनिहालिछन,'अघी माछा मासु खान हुन्न भन्ने अहिले माछा खान्छु भन्ने?'। पण्डित पनि के कम,तुरन्त भनिहाले 'किताबको माछा पो
खान हुन्न,खोलाको माछा त खान के भो रे?'
अब के कुरा गराइ भो र कसो?
दुर्जेय जी त्यो फलफुल त फिर्तै लानुपर्नेरहेछ।
रमेशमोहन अधिकारी 27/3/10 7:34 PM
Jotare Dhaiba 28/3/10 9:28 AM
अपरम्पार ओठे लीला र थोत्रो व्यावहारिक जीवनले यहाँ पनि मज्जाले काम गरेछ ।
आफ्नो ताल पुरानै हिसाबमा हुने, तर बोल्न र केही लोलोपोतो पेस गर्न किन बाँकी राखौँ भन्ने नवउदारवादी सोचको नतिजा होला यो चाहिँ । संस्कृति होस् या विकृति, पर्‍या बेलामा तिनले सबैमा वाणी दिन्छन् । नीतिनिर्माताको हकमा अझ निकै नजिक लाग्यो यो अवस्था ।
धेरैपछि कथा पढ्न पाइयो दाइ ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) 29/3/10 1:40 AM
Basanta 29/3/10 11:21 AM